असोज १५, काठमाडौं। नेपाली बजारमाा केहि सातादेखि उकालो लागेको सुनको मूल्यमा बिहीवार भने सामान्य गिरावट आएको छ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा रू.२०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीवार फाइन गोल्डको मूल्य प्रतितोला रू.९४ हजार ५०० र तेजावी गोल्डको मूल्य प्रतितोला रू.९४ हजारमा कारोबार भइरहेको छ ।
बुधवार भने अघिल्लो दिनका तुलनामा रू.५०० ले बढेर प्रतितोला रू. ९४ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो। बिहीवार चाँदीमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू. १५ ले घटेर प्रतितोला रू.१ हजार १७५ मा कारोबार भइरहेको छ ।
केही समयअघि नेपालमा सुनको मूल्य प्रतितोला रू.१ लाखभन्दा माथि पुगेको थियो । सुनको मूल्य घटबढ भइरहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा खुुकुलो भए पनि सुनको खरीदविक्री भने अझै ठप्प अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आज अन्तिम दिन [२०७७ कार्तिक, १४]
माउन्टेन इनर्जी नेपालद्वारा साधारण शेयर बाँडफाँटमा नपरेको रकम फिर्ता[२०७७ कार्तिक, १४]